किन गरिन् प्रियंकाले आत्महत्या प्रयास ?
भारतीय चर्चित अभिनेत्री, गायक तथा सन् २००० की विश्व सुन्दरी प्रियंकाले आज जन्मदिन मनाउदै छन् । सन् १९८२ जुलाई १८ मा जमदेशपुर झारखण्ड भारतमा जन्मिएकी प्रियंकाका जीवनमा धेरैपटक उतार चढाव आए ।
आज ३५ औं जन्म दिन मनाउन लागेकी प्रियंकाले सन् २००२ मा उनले आत्महत्याको प्रयास गरेकी थिइन् । सन् २००० मा मिस वल्र्ड बनेकी प्रियंका त्यतिबेला असिम मर्चेन्ट नामक व्यक्तिसँग प्रेम सम्बन्धमा थिइन् । फिल्म क्षेत्रमा निकै संघर्षको समयमा उनले आत्महत्या गर्नेप्रयास गरेको उनका मेनेजर प्रकाश जाजुले सन् २०१६ मा सामाजिक संजालमा खुलासा गरेका थिए ।
संघर्षका ती दिनमा उनले त्यस्तो प्रयास गरेको भएपनि अहिले उनी खुसी छन् । अमेरिकी चर्चित युवा गायक निक जोनससँग २०१८ नोभेम्बरमा विहे गरेकी प्रियंका अहिले खुसीयाली जीवन बिताइरहेकी छन् । प्रियंका बलिउड फिल्म इण्डष्ट्रिजमा सबैभन्दा बढी शुल्क लिएर काम गर्ने अभिनेत्रीका रुपमा मानिन्छीन् । उनले सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रीको राष्ट्रिय पुरस्कार समेत हासिल गरिसकेकी छन् ।
सात महिनामा नौ करोड आम्दानी गर्यो व्यास नगरपालिकाले
१० फागुन, तनहुँ । तनहुँको व्यास नगरपालिकाले चालु आर्थिक…
बडीमालिकामा भेटिएको बम सेनाद्वारा निष्क्रिय
१० फागुन, मार्तडी । यहाँस्थित बडीमालिका नगरपालिका-९ मा रहेको पीसविन…
एनआरएनए युकेमा हस्तक्षेप भएको भन्दै उपाध्यक्षले लेखे यस्तो पत्र
कति छ त आजको बजारमा विदेशी मुद्राको विनिमय दर ?
तुइन तर्न १०० रुपैयाँ, पैसा नहुनेले कर्णाली वारपार गर्न पाउँदैनन् !
वडा सदस्य र इन्जिनियर ७५ हजार घुस सहित पक्राउ
कहाँ-कहाँ अनि कहिले हुँदै छ भुतपूर्व सैनिक सम्मेलन ? नाम दर्ताका लागि के-के कागजात चाहिन्छ त ? ७ दिन पहिले | संसार न्यूज़